Taliska Ciidamada daraawiishta Puntland ee difaacca Galgala oo ka waramay dhaqdhaqaaqyada ciidan ee kadhanka ah Al-shabaab – Radio Daljir
Febraayo 18, 2013 6:13 b 0
Bosaso, Feb 18 – Ciidamada daraawiishta ee Puntland ayaa dhaqdhaqaaqyo ciidan? kawada dhulka Buuraleyda Galgala oo ay kula dagaalamayaan? Ururka Al-shabaab.
Maalmihii lasoo dhaafay ayaa ciidamada amaanka Puntland waxa ay weerar ku qaadeen goob ka mid ah dhulka buuralayda Calmadow oo ay ku jireen xubno katirsan Al-shabaab.
Jaamac Siciid Warsame Jaamac Afguduud oo kamid ah Saraakiisha horkacaysa ciidamada daraawiishta Puntland ee kusugan Buuraleyda Galgala ayaa usheegay Radio Daljir in ay kago`antahay ciidamada Puntland soo afjarida dagaalka Galgala.
Waxaa sidoo kale uu ka hadlay dhaqdhaqaaqyada ciidadan ee haatan ay wadaan iyo meelaha ay ku tuhmayaal Al-shaababku inay joogaan.
Waraysiga oo dhamaystiran hoos kadhagayso.
Somaliland oo waddo qorshe ganacsatada lagu dhiirro-galinayo maalgashiga dalka